६ महीनामा ९ करोड १८ लाख राजस्व संकलन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार ६ महीनामा ९ करोड १८ लाख राजस्व संकलन
६ महीनामा ९ करोड १८ लाख राजस्व संकलन
माघ २९, रौतहट । मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले ६ महीनाको अवधिमा रू. ९ करोड १८ लाख ३८ हजार ५२७ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महीनामा चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापना भएको हो ।
साउनदेखि पुससम्म रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रू. ६ करोड ३१ लाख ६ हजार ८८३ राजस्व संकलन भएको मालपोत कार्यालयका सहलेखापाल बाबुराम दक्षितले जानकारी दिए । यसैगरी पूँजीगत लाभकरबाट रू. १ करोड ९५ लाख १७ हजार ५८६ संकलन भएको छ । सहलेखापाल दक्षितका अनुसार संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत रू. ३ करोड ७८ लाख ६४ हजार १३० स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत रू. २ करोड ५२ लाख ४२ हजार ७५३ रकम प्रदेश कोषमा जानेछ ।
गत २०७१ असोज ३० गते मन्त्रिपरिषदले चन्द्रनिगाहपुर, गरुडा र मौलापुरमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा गौरमा विरोध भएपछि गत २०७१ चैत्र २० गतेको निर्णय सरकारले स्थगित गरेको थियो । गत २०७१ साल असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नै सरकारले २०७५ जेठ २० गते निरन्तरता दिँदै चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रनिगाहपुर, जुडिबेला, सन्तपुर र डुमरियाका साथै बृन्दावन नगरपालिकाको रमौली, बिश्रामपुर र सखुअवाधमौरा क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको छ । यसैगरी गुजरा नगरपालिकाको रंगपुर, कनकपुर र प्रतापपुर पल्टुवा तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लक्ष्मिनिया र फतुवा हर्षाहाका साथै कटहरिया नगरपालिकाको भसेडवा र हथियाईको कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । मालापोत कार्यालयले अनलाईन प्रणालीबाट पूर्जा वितरण गर्दै आएको छ ।
गड्डाचौकी भन्सारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन
२१ करदाताले तिर्छन् करको आधा हिस्सा